Mareykanka oo walaac ka muujiyay xaaladaha ka taagan Muqdisho | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Uncategorized Mareykanka oo walaac ka muujiyay xaaladaha ka taagan Muqdisho
Wasaaradda Arrimaha Dibadda dowladda Mareykanka ayaa shaacisay inay si aad ah uga walaacsan tahay rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyaga oo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay is xakameeyaan oo ay si nabad ah ku xalliyaan khilaafaadkooda.
Qoraal kasoo baxay Xoghayaha Wasaaradda Arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in waxkasta looga gudbi karo caqabadaha taagan ee doorashada Wadahadal iyo is afgarad
“Mareykanka si weyn ayuu uga walaacsan yahay iska hor imaadyo rabshado watay ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana ugu baaqeynaa
dhammaan dhinacyada inay xakameeyaan oo ay xalliyaan tooda khilaafaadka si nabad ah. Wadahadal iyo is afgarad waa siyaabaha kaliya ee lagu xalin karo caqabadaha doorashada ayaa lagu yiri” Qoraalka Xoghayaha.
Ugu dambeyn waxaa loogu baaqay dhinacyada Soomaalida inay wadahadal wax walba ku dhameeyaan, isla markaana Mareykanka uu garab taagan yahay kana fiirsanayo tallaabooyinka laga qaadayo kuwa wiiqaya dadaada socda.
” Waxaan ka codsaneynaa dhinacyada inay dib u bilaabaan wadahadalada hal mar si waddo lagu heshiiyey oo horay loogu socdo Doorashooyinka,
Mareykanka wuxuu diyaar u yahay inuu tixgeliyo dhammaan wixii la heli karo, oo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo xannibaadaha Safarada hoggaamiyeyaasha , si looga jawaabo dadaallada lagu wiiqayo nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya.
Beesha Caalamka ayaa dadaal badan gelisay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka kajira dalka ee salka ku haya arrimaha doorashooyinka, iyaga oo dhowr jeer kulamo kala duwan la qaatay Madaxda Sare ee dowladda Soomaaliya iyo saamileyda kale ee Siyaasadees, balse ilaa iyo hadda wada-hadalladaas aan wax horumar ah laga gaarin.